www.xamarcade.com » Kuuriyada Koonureed oo markab dagaal usoo dirtay xeebaha dalka Somalia
Kuuriyada Koonureed oo markab dagaal usoo dirtay xeebaha dalka Somalia
By xamarcade On: 05 Mar, 2017 In: wararka
Dowlada Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in markab dagaal oo nooca wax burburiya ah usoo dirtay xeebaha dalka Soomaaliya
ay uu qeyb uga qeyb qaato howlgalka la dagaalanka Burcad-badeeda.
Markabka dagaal oo ay la socdeen ciidamo kuwa badda ah ayaa ku biiray ciidamada Midowga Yurub ee howlgalka Atalanta ka fulinayo xeebaha Somalia, sida laga soo xigtay wasaarada difaaca Kuuriyada Koonfureed.
Sarkaal katirsan Militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa u sheegay Wakaalada wararka dalkaasi ee Yonhap in markabka dagaal uu soo gaarey xeebta ku dhaw magaalada Boosaaso, halkaasi oo inta badan ay ka dhacaan falalka afduubka Maraakiibta shisheeye.
Ciidamada Midowga Yurub ayaa waxay ka howlgalaan biyaha ku dhaw gobolka Bari oo kulaala gacanka cadmeed, halkaasi oo marin muhiim u ah maraakiibka ganacsi ee laga leeyihin dalalka caalamka.
Howlgalka Markabiinta Midowga Yurub ayaa ah ilaalinta maraakiibka shixnadaha ganacsiga xambaarsan ee isticmaalo xeebaha dalka Soomaaliya, kuwaasi oo looga baqayo inay afduubtaan kooxaha Burcad badeeda ah.
Sidoo kale dowlada Spain ayaa markab dagaalo oo ah kuwa diyaaradaha ka duulaan kusoo biiriyay howlgalka caalamiga ah ee ka soconaya biyaha badda Somalia, kaasi oo lagu cirintirayo Burcad badeeda.